Olee otú Bee VOB Files na Top 10 Best Free VOB egbutusị
"M dị converted a vob faịlụ (ma gụọ 2.3 GB) iji dvd ịda mbà. Achọrọ m kewara vob rigo iche iche mkpachị (ọ na e dere dị iche iche music videos). Agbalịrị m nnọọ iji MPEG video ọkachamara .. M na-ahọrọ òkè mgbe ahụ exported DVD MPEG .. ọ na-ewe banyere 15minutes ime a 3 nkeji clip. Ọ bụ n'ebe ahụ mfe ụzọ ime nke a? "
Dị ka nwoke n'elu, nwere ike na-ị na converted a otutu VOB faịlụ site na gị music DVD. Na kwa, ị na-achọ ụzọ dị mfe iji bee ọ bụla song otu faịlụ. Na nke a, i nwere ike iji Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bee VOB faịlụ n'ime ọtụtụ agba na mbupụ ọ bụla clip n'ime ọhụrụ faịlụ ọsọ ọsọ na mfe.
Jiri ya tụnyere ndị ọzọ video edezi ngwaọrụ, Wondershare VOB cutter azọpụta oge maka ihe gị. E wezụga ịcha VOB faịlụ ka ọ bụla ogologo kpọmkwem, ọ na-enye gị ike na mbupụ niile gị chọrọ VOB mkpachị n'ime dị iche iche faịlụ na otu laa, mfe ọrụ gị nke ukwuu.
Akụkụ mbụ, Aga m na-egosi gị otú bee VOB faịlụ na windows version nke VOB video cutter nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Tinye VOB faịlụ ka a VOB cutter
Pịa bọtịnụ Ibu Ibu VOB faịlụ site na kọmputa na-a VOB video cutter. Ozugbo, ị ga-achọpụta na kwekọrọ ekwekọ VOB faịlụ Ogwe e kwukwara na ebi ndụ nke a usoro.
Nzọụkwụ 2: Cut VOB n'ime mkpachị
Right pịa VOB faịlụ mmanya ị chọrọ ịkpụ, na mgbe ahụ họrọ "Dezie" nhọrọ. Na popping-elu "ewepụtụ" window, e nwere abụọ sliders na ma nsọtụ nke video ọganihu mmanya. Iche iche ịdọrọ na dobe abụọ sliders ka mmalite na-agwụcha oge, wee pịa "Scissor" akara wepụ họrọ video clip.
Mgbe ị na bee VOB dị ka ị chọrọ, dị nnọọ pịa "OK" iji gosi ntọala ndị a. Ozugbo, ị ga-ahụ họrọ video clip nwekwara e depụtara na ebi ndụ nke ngwa a.
Nzọụkwụ 3: mbupụ niile VOB mkpachị
Pịa format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ, na mgbe ahụ họrọ "VOB" format ke "Format"> "Video" udi. Ke akpatre, pịa "tọghata" button na ala-nri akuku nke interface na-amalite exporting niile VOB faịlụ. Mgbe akakabarede a mere, pịa "Open nchekwa", ị ga-ahụ na onye ọ bụla VOB clip na-echekwa na otu faịlụ.
Akụkụ nke abụọ, top iri kasị mma VOB egbutusị na isi atụmatụ.
DVD cutter gbakwunyere
Nke a VOB cutter bụ ihe oké ọnụ nhọrọ na-emesi mma. Nke a pụtara na video clip kere bụ dị ka nke otu àgwà dị ka ihe mbụ. Ị na-adịghị na-agba àmà emechaghi akụkụ ma ọ bụ skipping nke akụkụ. DVD cutter gbakwunyere abịa kemfe mgbe ịcha obere akụkụ si nnukwu video faịlụ. Ọzọ uru nke a cutter bụ na, ọ bụ ọrụ enyi na enyi na dakọtara niile Windows nsụgharị. Niile i nwere ime bụ:
Pịa Mark mmalite
Pịa Mark ọgwụgwụ
Pịa play-ahọrọ na ịhụchalụ ahọrọ akụkụ
Mfe MP3 cutter
Nke a cutter dị ike ịcha MP3 faịlụ. E wezụga VOB, Ọ nwekwara ike na-akwado a dịgasị iche iche nke faịlụ dị ka FLV, MOV, MP4 na ndị ọzọ. The free cutter-enyere gị ike ụdaolu na-awụ ọsọ n'ugwu, bee audio mkpachị maka fim ma ọ bụ songs ma ọ bụ bee ọdịyo ka obere akụkụ. I nwekwara ike ịchịkwa olu nakwa dị ka asụsụ n'ihi na e nwere 38 dị iche iche na nhọrọ asụsụ dị. Iji Mfe MP3 cutter 4dots bụ n'ezie mfe n'ihi na ị naanị imeghe video, pịa Malite na ọgwụgwụ bọtịnụ ma chekwaa ma ọ bụ preview.
WinX Free VOB ka MP4 Ntụgharị
The cutter bụ otu nke kasị mma-egbutusị na tọghata VOB ka MP4 maka playback nzube. Ọ nwekwara ike grabbing oyiyi na-azọpụta ha dị ka PNG faịlụ formats. Ọ bụ ngwa ngwa, virus free na nwere àgwà video ngbanwe Njirimara enyere elu àgwà vidiyo na ọdịyo. WinX Free VOB ka MP4 Ntụgharị na-abịa na ndị na-esonụ ahaziri edezi atụmatụ.
Video / Audio ntọala ike ezi oyiyi na ụda olu mmetụta.
Mmepụta profile- kpebie hà video
Trimming- coverts VOB ka MP4 site n'ịkọwapụta amalite na-agwụcha oge.
The cutter akwado a nso nke faịlụ gụnyere avi, na MP4. Ọ na-akwado ụfọdụ processors dị ka Athlon 64 X 2 na Intel (R) Pentium D Dual-Core. Ị nwere ike mezue ọnwụ ọrụ n'ime nkeji ole na ole na ihe karịrị 300% ọsọ. Nke abuo, ya were na-adịghị mgbagwoju anya na ma ndị ọkachamara na beginners nwere ike comfortably eji ya. Free Video cutter Pro v1.0.2 na-akpaghị aka na-egosipụta ngwaike nhazi na mgbe ahụ na-emetụta kwesịrị ekwesị ọnwụ nkata. Ị nanị mkpa pịa mmalite na ọgwụgwụ buttons na iji òké ma ọ bụ ịdọrọ na dobe ndị a nhọrọ.
Universal AVI ka VOB Ntụgharị
The Ntụgharị atọghata AVI faịlụ formats ka VOB na-erughị ise sekọnd. Nke a egosiputa ya elu arụmọrụ na ala nke ọrụ. Imewe bụkwa n'ụzọ kwụ ọtọ na onye ọ bụla nwere ike iji Universal AVI ka VOB Ntụgharị v1.0. Niile i nwere ime bụ download faịlụ online, n'efu na wee soro ntuziaka nwụnye. Mgbe ahụ, na-ahọrọ faịlụ ka converted na àgwà ụkpụrụ họọrọ. Egbu, pịa tọghatara bọtịnụ na-eji na-enwe ọganihu mmanya nyochaa akakabarede usoro.
Nke a bụ a cutter na he dị iche iche faịlụ dị ka mp4, mpg na VOB ndị ọzọ formats dị ka avi na mp4. Weeny Free Video cutter v1 2-enyere gị aka bee videos ewepu Mgbasaozi ma ọ bụ trailers. I nwekwara ike hazie nhọrọ dị ka gị mmasị. Ị nwere ike ịgbanwe video iji, etiti bitrate na codec. Ị nwekwara free Iji nyegharịa ma ọ bụ ọbụna kpatụ size, olu nakwa dị ka mma.
Ọ bụrụ na ị chọrọ bee ọdịyo faịlụ ma ọ bụ sonyere a ọnụ ọgụgụ nke video faịlụ ọnụ, mgbe ahụ na-arụ ọrụ na free iovSoft MP3 cutter joiner v3.06.09. Ya nhazi mejupụtara a ụgwọ free MP3 cutter na joiner. Ị nwere ike ịnweta Isi ekele MP3 cutter ma sonyere ha kpam kpam. Free iovSoft MP3 cutter joiner v3.06.09 ga-atụle ọrụ n'ihi na ị na-ahọrọ njehie free ntọala na-amalite na-akwụsị ọrụ. Ọ ngwa ngwa na-akwado Ngwọrọ encoder, OGG coder, MP3 VBR na OGG VBR kwa.
Ị pụrụ nanị bee gị MP3 music faịlụ ekele My Mp3 Spliter v1.0. Ọ bụ na-ọrụ enyi na enyi na ị pụrụ ịnụ ụtọ elu àgwà audio Obere vidiyo. Mgbe na-eji ihe omume a, nanị download gị MP3 faịlụ na ike ndị kasị mma ringtone.
The cutter nwere ike ibelata ọtụtụ narị bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku mp3 faịlụ a laa. Ọ bụ ibu-ngwa ngwa na ya akakabarede adịghị ike nwa oge faịlụ. Ọ na-ahaziri iji nabata multi-isi CPU na SSE na-enyere Dọrọ na dobe. Ọzọ otú ahụ, ọ bụ dakọtara na Windows Vista na Windows 7. Ya ọrụ interface bụkwa yiri nke Windows Explorer N'ihi ya mfe iji. Ndị ngwọrọ encoder na-eme ka ya n'ibu ngwa ngwa. Iji otú ahụ na atụmatụ, ị pụrụ iṅomi na-azọpụta audios si iyi faịlụ na ide ID3v1, adaka MP3 na ID3v2 tag.MP3 cutter v10.1.1 nwekwara ike bee ihe MP3 faịlụ ka:
Chọrọ ogologo akụkụ
Hà n'ogologo mkpachị
Specific size mkpachị
Onye ọrụ nkọwa (Malite na ọgwụgwụ ebe)
The free chick Video cutter v2.350 ga-enyere gị ma ebipụ ma ọ bụ nchawa gị videos. Ọ na-amara dị ka Video splitter, Video mkpagide ma ọ bụ Video cutter. Site aha ndị a, ị nwere ike ịgwa na i nwere ike inwe ọtụtụ mkpachị si otu video faịlụ. I nwekwara ike isonyere ha na-chọrọ size na ogologo. The ịba uru na-akwado a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ gụnyere AVI, MP4, DivX na ọtụtụ ndị ọzọ. Chick Video cutter v2.350 nwere nnukwu ndakọrịta nso n'ihi na ọ ga-eji na niile Windows software. Ya na-agba bụ nnukwu na ya na àgwà mmezi.
Olee ka jikota / Ikpokọta / Jikọọ VOB Files
Olee otú iji tọghata VOB ka MP4 na Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
Olee otú iji tọghata VOB ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Olee otú iji tọghata na downlaod 4k video na MP4 Format
Olee otú Mee ihe Intro na Mgbe mmetụta
Top 10 Free Christmas Movies Online
Ụzọ atọ ịkọrọ gị Christmas Photos ezinụlọ na ndị enyi
> Resource> Video> otú bee VOB Files na Top 10 VOB egbutusị